मेडिकल कलेजः सरकारी अब्बल कि निजी ? यस्तो छ अवस्था - Deshko News Deshko News मेडिकल कलेजः सरकारी अब्बल कि निजी ? यस्तो छ अवस्था - Deshko News
मेडिकल कलेजः सरकारी अब्बल कि निजी ? यस्तो छ अवस्था
थप मेडिकल कलेज खोल्नेरनखोल्ने विषय हाल भएका निजी मेडिकल कलेजमा पढेका विद्यार्थीको अवस्था हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । यही अवस्थामा थप मेडिकल कलेज खोले काउन्सिलको परीक्षामा विद्यार्थीको पास दर थप निराशाजनक हुने छ ।
कलेज खोल्ने, तर त्यसले कस्तो पढाइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । अहिले खडेबाबाबाट सतर्क भएका छौँ, तर बिरामी नै नभएका कारण विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा समस्या छ । त्यसैले कलेज होइन, गुणस्तर बढाउनुपर्ने देखिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।